रिजल्ट आउनु अघि करिश्मा मानन्धरका प्रिन्सिपल के भन्छन् ? - समाचार - साप्ताहिक
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा प्रकाशन हुन अब केहि घण्टा मात्रै बाँकी छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मिटिङ बसिरहेको छ, मिटिङ सकिनासाथ एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुनेछ । सबै तयारी पूरा भइसकेको र बोर्डले निर्णय गरे लगत्तै नतिजा प्रकाशन गरिने परीक्षा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद अधिकारीले बताए ।
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले पनि एसईईको परिक्षा दिएकी थिइन् । मैतीदेवीमा रहेको त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालयबाट १० कक्षा अध्ययन गरेकी उनको परिक्षा केन्द्र विजय स्मारक मा.वि. डिल्लीबजार परेको थियो ।
यसै सन्दर्भमा हामीले उनी अध्ययनरत स्कुल त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक वाङ्ग्देन लामा सरसँग छोटो कुराकानी गरेका छौं, प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश ।
अनुशासित विद्यार्थीको हिसाबले हामीले चिन्छौं । समयमै स्कुल आउने र आफुभन्दा साना भाईबहिनीहरुसँग मिलेर अध्ययन गर्ने स्वभाव थियो । पुरै विषय अध्ययन गरेर मात्र घर फर्कने र साथीभाईहरुसँग मिल्ने उहाँको राम्रो स्वभाव धेरैका लागि प्रेरणाको श्रोत हुन सक्छ ।